July 2018 – Trend.com.mm
Yoona နဲ့ Hyoyeon တို့ရဲ့ #KiKiChallenge ကလည်း ဘယ်လိုတောင် ချစ်ဖို့ကောင်းလဲ မေး
Posted on July 31, 2018 July 31, 2018 by Wint
Drake ရဲ့ In My Feeling သီချင်းနဲ့ #KiKiChallenge လုပ်ကြတာ အနောက်နိုင်ငံတွေပါမက အာရှတစ်ခွင်ကိုပါ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in K-Pop, Music, NewsLeaveaComment on Yoona နဲ့ Hyoyeon တို့ရဲ့ #KiKiChallenge ကလည်း ဘယ်လိုတောင် ချစ်ဖို့ကောင်းလဲ မေး
သူတို့လေးတွေ တညှောင်ညှောင်လုပ်နေတာ ဒါတွေကြောင့်ဆိုတာသင်သိရဲ့လား?
ကြောင်လေးတွေက ဘာလို့ညှောင်ညှောင်အော်ကြတာလဲ?ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြောင်လေးတွေကသင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးသင့်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိလို့ပါ 😉သူတို့အော်နေရင် သင်အာရုံမစိုက်ပဲမနေနိုင်ဘူးမဟုတ်လား? တကယ်လို့သင့်မှာကြောင်လေးတစ်ကောင်ရှိရင် သူတို့အော်သံတွေကနေ ကြောင်ဘာသာစကားတောင်တတ်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်နော်။ ဒါနဲ့ သူတို့ရဲ့ညှောင်ညှောင်အော်သံက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, PetsLeaveaComment on သူတို့လေးတွေ တညှောင်ညှောင်လုပ်နေတာ ဒါတွေကြောင့်ဆိုတာသင်သိရဲ့လား?
ကဲကဲ.. လှပတဲ့ခြေသလုံးလေးတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့ စတင်စို့
Posted on July 31, 2018 by Wint
ခြေသလုံး ကြွက်သားတွေဟာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း ဆော့ဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ပါတယ်။ ခက်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဘာပစ္စည်း စက်ကိရိယာမှမလိုပဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Health, LifestyleLeaveaComment on ကဲကဲ.. လှပတဲ့ခြေသလုံးလေးတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့ စတင်စို့
ကျွန်တော်တို့အားလုံး လမ်းပျောက်နေတဲ့ အချစ်ကျေးကျွန်အဖြစ်သို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ ရောက်ဖူး ကြပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အဆိပ်သင့်နေတာပေါ့။ ရင်ထဲက လေးလေးနက်နက်ချစ်တဲ့သူကိုလက်လွှတ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ချစ်တဲ့သူကို လက်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါ ….
Nam Joo Hyuk ဆို Weightlifting Fairy Kim Bok-joo ၊ The » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on Nam Joo Hyuk လက်မှာဒဏ်ရာတွေတောင်ရသွားအောင် ဘယ်လိုတွေတောင်အားပေးကြမ်းခဲ့လဲ အစ်မတို့ရေ 😅
ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူမိန်းကလေးအတွက်ရိုမန်တစ်ဆန်တာတွေအမြဲဖန်တီးပေးနေတာထက် ဒီလိုအချက်တွေအမြဲလုပ်ပေးနေသူပါ။ရိုမန်တစ်ဆန်တာတွေဖန်တီးပေးမှ အချစ်စစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်။တကယ့်ချစ်သူကောင်းယောက်ျားလေးဆိုတာ သင့်ကို အမြဲ ဘုရင်မတစ်ပါးလိုမော်ကြွားနေနိုင်အောင်၊ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေနိုင်အောင်၊ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် အနားကနေကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on သင့်ချစ်သူမှာ ဒီလိုအချက်လေးတွေရှိနေရင် သင်က ချစ်သူရကံကောင်းတာပါပဲ ❤️
တက်တူးဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားပေါ်မှာ အမြဲတမ်းစွဲထင်နေမယ့်အရာပါ။အတူတူကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေများလာတဲ့အခါ၊တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်မှီခိုအားထားချင်စိတ်တွေများလာတဲ့အခါ၊သံယောဇဉ်တွေတိုးလာတဲ့အခါ၊တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖေးမရင်း တစ်ယောက်မရှိရင်တစ်ယောက်မနေနိုင်တော့ဘူးဖြစ်ကြတဲ့အထိ အချစ်တွေများလာတဲ့အခါ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ကိုယ်ကအရမ်းချစ်ကြောင်းပြသဖို့အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပေးချင်စိတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ချစ်သူတွေ သူတို့ရဲ့အချစ်တွေကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါအများဆုံးလုပ်လေ့ရှိတာကတော့ တက်တူးထိုးကြတာပါပဲ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, NewsLeaveaComment on ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း စကားနဲ့တင်မကတက်တူးထိုးပြီးသက်သေပြခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်များ
သင်က နဂါးမောက်သီးကိုမကြိုက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တောင် ဒီစာလေးဖတ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းသွားပြေးဝယ်ချင်စိတ်ပေါက်လာမှာအသေအချာပါပဲ။နဂါးမောက်သီးက စားလို့ရတဲ့အပြင် သင့်ရဲ့အသားအရည်အလှအပအတွက်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကျိုးပြုနေပါတယ်တဲ့။နဂါးမောက်သီးတစ်လုံးက ဘယ်လိုတွေအကျိုးပြုနေလဲဆိုတာ အတူတူဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင် *၀က်ခြံအဖြစ်များတတ်တဲ့အသားအရည်အတွက်* နဂါးမောက်သီးက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on အလှအပရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့ နဂါးမောက်သီးအစွမ်းကလည်း မသေးဘူးပဲ 😎
ပရိတ်သတ်တွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
Posted on July 30, 2018 by Wint
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ကတော့ fantasy drama အမျိုးစားဖြစ်ပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, MoviesLeaveaComment on ပရိတ်သတ်တွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
Posted on July 30, 2018 August 30, 2019 by Wint
စိတ်ပညာရှင် Dr.Sususan Edelman ဟာ ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ Relationship တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ စသင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on မင်းရဲ့ချစ်သူကို ယုံကြည်ချင်ရင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေ မေးထားသင့်